दुईघण्टामै ४.३ अर्बको कारोबार, आज रेकर्डै रेकर्ड बन्ने संभावना Bizshala -
दुईघण्टामै ४.३ अर्बको कारोबार, आज रेकर्डै रेकर्ड बन्ने संभावना
काठमाण्डौ । सेयर बजार परिसूचक(नेप्से)मा उछाल आएसँगै कारोबार रकममा समेत नयाँ रेकर्ड बन्ने अवस्था देखिएको छ ।
बजारमा कारोबार सुरु भएको पहिलो २ घण्टाभित्र ४ अर्ब ३२ करोड बढीको सेयर कारोबारको नयाँ कीर्तिमान बनेको हो । हालसम्म नेपालको सेयर बजारमा कुनै पनि दिन कारोबार सुरु भएको २ घण्टाभित्रै यति ठूलो आकारमा सेयर कारोबार भएको थिएन ।
पहिलो २ घण्टाको कारोबारको गति पूरा अवधिभर कायम रहे आज कारोबार रकमले पनि नयाँ कीर्तिमान बनाउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचकले अलटाइम हाई १८८१ को विन्दूलाई तोडेर १९०० माथिको यात्रा गरिरहेको छ । यसरी एकैदिन नेप्से परिसूचक र कारोबार रकमले समेत नयाँ कीर्तिमान बनाउने देखिएको छ ।
दिउँसो १ बजेसम्म नेप्सेमा ९० लाख ३६ हजार बढी कित्ता सेयर कारोबार भइसकेको छ। उछालको गतिमा रहेको नेप्से केही घटेर ३१ अंकको बढोत्तरीमा सीमित भएको छ भने बैंकिंग, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र अन्य समूहको परिसूचकमा २ प्रतिशतभन्दा बढीको उछाल आएको छ ।
व्यापार, होटल, बित्त, निर्जीवन बिमा, जीवन बिमा र माइक्रोफाइनान्स समूह घट्न थालेका छन् ।
यो अवधिसम्म ४ कम्पनीको सेयरमूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ । एनएमबी माइक्रोफाइनान्स, पाँचथर पावर, नवील बैंक, आँखुखोला जल्विद्युत कम्पनीको मूल्यमा सर्किट लागेको हो ।
काठमाण्डौ । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको प्रिअलटमेन्ट आज बुधबार...
काठमाण्डौ । नेप्से परिसूचक बुधबार प्रि–ओपन सेसनमा ३४.६२ अंकले...
पिपुल्स हाइड्रोपावरले रु. ८२.५ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने,
काठमाण्डौ । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ८२ करोड ५० लाख...
निफ्राको आईपीओमा २.३९ गुणा बढी आवेदन, कतिले भरे ?
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को...
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज छिट्टै खुल्ने, १० कित्ताको व्यवस्था हट्ने
-अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपाली सेयर बजारमा छिट्टै नयाँ स्टक...
सातामै करिब २ लाखले खोले डिम्याट खाता र मेरो सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकको ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको...
निफ्राको सेयर रजिष्टारमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल नियुक्त
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले बैंकको शेयर...
निफ्राको आईपीओमा आवेदन दिने समय थप
काठमाण्डौ । हालसम्मकै ठूलो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड...